Sat, Apr 21, 2018 | 17:22:16 NST
सभासद नै नभएका मान्छेलाई मन्त्री बनाउनु भनेको देशमा लोकतन्त्र हैन छाडातन्त्र हावी हुनु हो।
जनताको लागि केहि गर्छु भन्ने आत्मबिश्वास ब्यबहारमा देखाए सभासद/गैरसभासद जो मन्त्री भएपनि फरक पर्दैन । जनतालाई चाहिएको शान्ति, बिकास र संबिधान हो ।
सांसद नभएका व्यक्ती मन्त्री बन्नु थियो त चुनाव किन गरेको ?
गैर सांसदहरु मन्त्री बनेको ठिक छ । उनीहरु पनि कुनै नियम फलो गरेर बनेका होलान् । यसमा कुनै दुबिधा छैन । तर यस्तो गर्नु थियो भने किन चुनाव गर्नु परेको होला नेपाल जस्तो गरिब देशले चुनावको लगि करोडौं ऋणी बन्न पुगेको छ। यस्तो गर्नु थियो भने जनताको मत को के मुल्य ? चुनाव नगरेर संविधान सभाका ६ सय १ जना पनि यसैगरि छनोट गर्नु नी, देशको खर्च पनि बच्थ्यो की ।
कमल साउद मलातिकोट ८ अछाम, हाल मलेशिया
नेपालको मौसम भविष्यबाणी बाटोमा बसेर हात हेर्ने पण्डितको जस्तै छ, ठ्याक्कै कहिले मिल्दैन, पूरा पनी कहिले मिल्दैन ।
संविधानसभाका अध्यक्षलाई सुझाव
संविधानसभाका नव निर्वाचित अध्यक्ष सुवास नेम्बाङले प्रमुख पार्टीका मुख्य नेताले रिसोर्ट र होटेलमा गएर सहमति खोज्ने प्रक्रियालाई तोडी संसद भवन मै बहस गर्नु पर्छ भन्ने कुरालाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने जरुरि छ । यसमा उहाँको मुख्य जिम्मेवारी रहने छ । संविधान सभामा सकभर सहमतिमा नत्र बहुमतीय प्रक्रिया बाट भए पनि संविधान जारी गर्नुपर्छ । नेम्बाङ संविधान सभाको अध्यक्षमा निर्बिरोध निर्वाचित हुनुभएकोमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
अघिल्लो संविधान सभा जस्तेा सहमति भएन भनेर नभनि निर्वाचन प्रकृयामा लगेर बहुमति प्रकृयाबाट भए पनि संविधान जारी गरेास ।
समग्रमा हेर्दा रेडियोको कारण ले गर्दा सुचनाको प्रवाह राम्रो छ यो हुनु पनि पर्छ/नेपाल कृषि प्रधान देश हो भनिन्छ.....
रेडियोले स्थानीय स्तरका समाचारलाई बढी प्रथमिकता दिनु पर्छ
रेडियोहरुले कुनै एक पार्टीको समाचार लाई बढी महतो दिने अरुलाइ कम ममतो दिने यस्ता धेरै रेडियो छन यसलाई शुधार्नु पर्छ र स्थानीय स्तरका समाचारलाई बढी प्रथमिकता दिनु पर्छ ।